Iyini imisebenzi yezinhlayiya zegazi?
Ingxenye enkulu yegazi lethu i-plasma yetshezi. Ingamanzi angu-90% futhi unombala wokhuni. I-plasma iqukethe amaprotheni ahlakazekile nezinye izinhlanganisela eziphilayo nezamaminerali. Kungenxa ye-plasma ukuthi igazi liphethe amangqamuzana abaluleke kunazo zonke emzimbeni. Yimiphi imisebenzi eyenziwa yizinhlayiya zegazi - bheka isihloko.
• I-Erythrocyte - amangqamuzana abomvu angenayo i-nucleus - amangqamuzana amaningi kakhulu egazi. Ziyisakhiwo sediski futhi ziqukethe iphrotheni ebizwa ngokuthi i-hemoglobin.
Amaseli amhlophe egazi - amangqamuzana amhlophe - ayingxenye yesistimu yomzimba. Umsebenzi wabo oyinhloko ukuvikela umzimba kusuka ezifweni.
• Ama-platelets yiwona amangqamuzana amakhulu kakhulu. Basiza igazi liguqulwe lapho kukhona ukulimala nokukhwabanisa. Igazi lingakwazi ukugcoba ngaphakathi emzimbeni wethu.
Khona-ke kukhona izivunguvungu, ama-clots egazi. Uma i-thrombus iphakama phakathi kwe-vein, ingaphazamisa ukujikeleza kwegazi, ngakho-ke ukuhlinzeka komoya. Izigubhu nazo ziyimiphumela yezindwangu zegazi. Kodwa kulokhu, i-thrombi igqoke imishanguzo eyondla ubuchopho. Ekubunjweni kwegazi, impilo yayo ithinta cishe yonke into: umoya esiwuphefumulayo, ukudla kwethu namanzi esiwaphuzayo. Amanzi olwandle nobusi yizona eziseduze kakhulu nokwakheka kwegazi. Akuyona ingozi ukuthi odokotela batusa ukuwasebenzisa ukugcwalisa izakhi ezidingekayo emzimbeni. Ngakho-ke kuyasiza kakhulu ukubhukuda emanzini olwandle futhi ugeze ngamanzi usawoti. Uju kufanele lithathwe ngaphandle kokuluqeda emanzini ashisayo. Ngesikhathi sokushisa okuphezulu, izinto eziningi eziwusizo zibhujiswa. I-pollen yemifino nezithelo nazo ziyisiza esibalulekile kakhulu segazi.
Yini esiyaziyo ngegazi?
• Kwabesifazane, ivolumu yegazi ingamaphesenti angu-3.9, kuyilapho amadoda engama-5.2 amalitha.
• Igazi lijikeleza emzimbeni wonke, lingene cishe yonke indawo, besebenzisa imishanguzo, imithanjeni kanye namapillazi kule njongo. Ihamba ne-oxygen emzimbeni, izakhi, ama-hormone, ama-enzyme nezinto ezihlukahlukene lapho impilo yethu nempilo yethu incike khona. Ngokuphumelela okufanayo, igazi lithwala i-carbon dioxide kanye nemikhiqizo ye-waste yametabolism (uric acid, amanzi asele, njll).
• Uma igazi elengeziwe lifika enhlanganweni, livuselela, futhi ngokufanayo. Igazi lidlulisela ukushisa, futhi ukulingana kokushisa emzimbeni kuxhomeke kulo. Kubaluleke kakhulu ukuthi igazi lisisiza ukuvikela umzimba emagciwane, sigcine ingculazi. Umzimba wethu uvikelekile ekulahlekelweni kwegazi, ngoba igazi lingakwazi ukugcoba lapho ubuqotho bezitho buthaka.
Ukuxilongwa ngokudonsa kwegazi
Ngamunye wethu okungenani kanye empilweni yami wanikeza igazi ukuhlaziywa. Ukucacisa iphepha elikhishwe ebhokisithri ngemiphumela, kubalulekile ukuqonda ukuthi yimiphi imigomo ekhonjiswa lapha nokuthi yini ayishoyo. Umzila wokuqala wokuhlaziywa komtholampilo uvame ukubalwa kwamangqamuzana egazi abomvu. Kumuntu onempilo, kufanele kube ngu-4.5-5 wezigidi / l (ngamadoda) no-3.5-4.5 million / l (kwabesifazane). Uma ukuhlaziywa kubonisa inani eliphansi, ke unake i-hemoglobin. Inani elincishisiwe lamaseli abomvu lingase lihlotshiswe ne-anemia. Inombolo eyengeziwe ye-leukocyte ikhombisa ukutheleleka kwebhaktheriya. Uma amangqamuzana egazi amhlophe ewa, khona-ke umzimba uthola igciwane. Ukucacisa ukuxilongwa, kuyadingeka ukubheka inani lamaseli athathwa ngokuhlukile kuma-leukocytes. Isibonelo:
• Inani elikhulayo lama-eosinophil abakha i-leukocytes, likhuluma ngokudla okunye. Umkhuba wale maseli ngamaphesenti angu-5. Kodwa futhi kwenzeka ukuthi ukuhlaziywa kubonisa okungaphezu kokuvamile, futhi azikho izimpawu ezibonakalayo zokungalingani. Kulesi simo, kubalulekile ukuhlola nge-allergenist bese uhlola izimpethu;
• ukwanda kwama-neutrophils, okubuye kube uhlobo lwe-leukocyte, kubonisa ukuvuvukala okuhlungayo, futhi okuthiwa "ama-neutrophils amancane" kungabonisa isifo esibi kakhulu - i-leukemia.
Ukugqoka kuhlotshaniswa nama-platelet. Uma inani labo linciphisa, khona-ke i-anemia yesibili kanye ne-cancers kungenzeka. Kodwa izinga eliphansi lamaplatelet liyakwenzeka futhi ekukhulelweni. Ezingeni elibucayi lama-50 000 / l, umuntu angafa ngokuphuma kwegazi. With platelets ephakeme, udokotela wakho angabheka i-leukemia, i-diphtheria, noma i-malaria. Ipharamitha ebalulekile yokuhlolwa kwegazi yisilinganiso se-sedimentation ye-erythrocyte (ESR). Uma izingane kulezi zibalo ngokuvamile ziba ngu 2.5 mm ngehora, bese kubadala - 8 mm. Ukwandisa i-ESR ekuvuvukala, njengamaphaphu noma izinso. Izinga likashukela egazini libonisa ukusebenza komzimba we-glucose. Uma ekuseni ngeshukela esiswini esingenalutho lingaphezu kuka-6.1, khona-ke umuntu unomkhuba wokugula ngesifo sikashukela. Futhi ngesilinganiso sabahlengikazi abangu-7.1 ngokuvamile base befaka ukuxilongwa okunikeziwe.
Uma igazi likhulu
Ukwenyuka kwe-coagulability kwegazi - imbangela yokubukeka kwemivamisa ye-varicose, i-thrombophlebitis, ukuhlasela kwenhliziyo nokushaywa yisifo. Ngokuvamile inkinga enjalo ekuqaleni ihlotshaniswa nokuntuleka kwamanzi emzimbeni. Qala ukuphuza amanzi anele ahlanzekile, futhi i-viscosity yegazi izobuyela ejwayelekile. Yidla imifino nemifino enomsoco, uphuze amanzi amaminerali namajusi, kodwa unciphise inani letiyi elimnyama, ikhofi nophuzo oludambisa amangqamuzana. Ama-Cherries kanye no-utamatisi kunomthelela ekunciphiseni i-coagulability yegazi. Kuwusizo ukuphuza isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi kanye namajisi e-garlic. Igazi le-cranberry izithelo kanye nomsila wamagilebhisi uphuzoziwe. Buka okuqukethwe kwe-iodine ekudleni, njengoba kunciphisa i-viscosity yegazi, kwandisa ithoni yemithwalo yegazi, kunciphisa ukucindezelwa kwegazi. Yidla izinhlanzi, iklabishi elwandle, feijoa. Kodwa khumbula ukuthi ukudlula okuningi kwe-iodine nakho kuyingozi. Noma kunjalo kungenzeka ukuthatha i-tincture ebantwini bezithelo ze-chestnut yamahhashi. Thatha ingilazi yesikhumba bese uthele ama-0.5 amalitha we-vodka. Ukumelela endaweni emnyama amasonto amabili, ubunzima. Gcina i-tincture esiqandisini. Thatha isisu esingenalutho ngamaconsi angu-25, uhlanganise ne-1/4 yamanzi indebe, izikhathi ezimbili ngosuku (ekuseni nakusihlwa). Ngemuva kwalokho ungadli kungakapheli imizuzu engama-30. Inkambo yokwelashwa ingamaviki amathathu. Bese uthatha ikhefu ngesonto bese uphinda ukwelashwa. Uma ujwayele uketshezi ngokweqile kwegazi, ungasebenzisi ukwelashwa kwe-nettle. I-viscosity yegazi ibuye isuke kusuka ku-parsley, inhlakanipho.
Nganoma iyiphi i-anemia, okokuqala, kubalulekile ukuqonda izimbangela zayo futhi ukuqeda. Ngaphandle kwalokho, ukwelashwa ngeke kusebenze.
• Uma kuyindaba nje yokudla okungenamsoco, khona-ke ekudleni kuyadingeka, okokuqala, ukwandisa inani lemikhiqizo ebambe iqhaza ekwakheni igazi. I-buckwheat, equkethe insimbi eningi, isithombo sebhitrudi, inyama yesibindi nesilwane. Kodwa ungasebenzisi kabi isibindi, ikakhulukazi ngesikhathi sokukhulelwa. Ihlunga zonke izinto eziyingozi, ezithatha egazini. Ngakho-ke, yidle kangcono ngokulinganisela.
• Kunconywa ukuba udle ukhilimu owengeziwe, ubisi namaqanda.
Sebenzisa kuphela imikhiqizo yobisi ngokuhlukile kwabanye, ngaphandle kwalokho ngeke bakwazi ukugaya kahle. Ngaphezu kwalokho, udinga ukwazi ukuthi kungcono ukuphuza ubisi ngama-sips amancane, ku-sly, ukuze izakhi ezivela kuso zixhumane kahle emathangeni omzimba futhi kwakungabikho ukuqothulwa.
• Ummbila, i-millet, i-turnip, kanye namantongomane, imbewu kanye namajikijolo kuyasiza, ikakhulukazi ama-blueberries, ama-strawberries nama-raspberries.
• I-anemia ingasiza amagilebhisi, ubhanana, kanye nabanikazi berekhodi ngokuqukethwe kwevithamini C - u-garlic no-anyanisi (ikakhulukazi eluhlaza). I-dill ne-pepper eluhlaza kuyasiza.
• Yidla uju omnyama, isanqante ehlutshiwe kanye ukhilimu omuncu. Sebenzisa amaji yemifino: hlanganisa ijusi lezinyosi, izaqathe kanye ne-radishes bese uthatha lo mkhiqizo u-1 tbsp. l. Izikhathi ezintathu ngosuku ngaphambi kokudla izinyanga ezintathu ulandelana.
• Noma yiliphi itiye le-multivitamin, elibandakanya i-currant emnyama, i-mountain ash, isiphuzo se-rose hip, kuhle. Zama, isibonelo, iresiphi enjalo. Thela izindebe ezimbili zamanzi abilayo 2 tsp. amajikijolo obomvu ash mountain, ake it brew for 1 ihora, ushukela ukunambitha uphuze for 3-4 ukudla nsuku zonke.
Kuvela kuphi i-anemia?
I-anemia ukuntuleka kwe-hemoglobin egazini. Futhi izimbangela zingabangela ukuphazamiseka kwamagciwane, izibungu, ukugaya ukudla okuncane kanye nokungondleki ngokwanele. Ezinganeni zeminyaka emihlanu yokuqala yokuphila, udokotela uthola i-anemia enezinga le-hemoglobin egazini elingaphansi kuka-110 g / l. Ezinganeni ezineminyaka engama-5 nangabantu abadala - ezingeni elingezansi kwe-120 g / l. Kuyathakazelisa ukuthi izazi ze-psychologists zaqaphela ukuthi abantu abathola ukwesaba impilo kaningi bahlushwa yi-anemia. Bacabanga ukuthi abalungile kuleli zwe. Uma nawe, unesifo semfuyo, bese uphinda amagama nsuku zonke: "Ngiyathanda impilo. Ngiyakujabulela ukuphila. Ukuphila nokujabulela ukuphila kuphephile. Ngiyajabula ngokuthi ngihlala kuleli zwe. " Ukuntula insimbi kuyimbangela evamile kakhulu ye-anemia. Izitho ziqala ukuthola oksijini encane, ngoba insimbi isisiza ukuyithwala ngomzimba. Ngenxa yalokho, igciwane lesandulela ngculazi liyanciphisa, ingozi yezifo ezithathelwanayo iyanda, ukukhathala nokunganakwa kubonakala. Futhi izingane zingase zibale ngisho nokukhula nokuthuthukiswa kwengqondo. Ezingxenyeni ezingenawo oksijeni nensimbi, ukuguqulwa kwesikhathi sekuqala ukuba khona, okuholela ekudakaleni kwemisebenzi yabo kanye nempilo ngokujwayelekile. Izizathu zokunciphisa i-hemoglobin egazini kungase kube ukungabi nalutho kwevithamini elibalulekile, njenge-B12. Ngokuvamile lolu hlobo lwe-anemia lwenzeka ngenxa yezinkinga nge-membrane yamangqamuzana esiswini namathumbu. Ezimweni ezinjalo, le vithamini ayitholi kahle igazi.
Amaqembu wegazi avele kanjani?
Wonke umuntu uzwile ukuthi igazi linamaqembu ne-Rh factor. Lezi zici zithembele ekubunjweni kwamaprotheni asezintweni zegazi. Iqembu legazi kumuntu alishintshi ngaphezu kwesikhathi sokuphila. Ososayensi bathi uma abantu bebe neqembu lokuqala legazi kuphela, kodwa manje bayazi ezine. Zenzeka kanjani? Kunezinkolelo eziningi zesayensi, futhi nansi incazelo eyodwa. Lokhu kwenzeke kancane kancane, njengoba lo muntu engeziwe ekudleni kwamaqembu omkhiqizo omusha. Abantu abaneqembu lokuqala legazi babondliwa ngenxa yokuzingela, ngakho isisekelo sokudla kwabo kwakuyi-proteins yezilwane. Ngokuhamba kwesikhathi, abadala baqala ukudla nokutshala imikhiqizo, ukuze kuvele iqembu lesibili legazi. Ngakho umzimba uvumelane nomhlobo omusha wokudla okunomsoco.
Iqembu lesithathu legazi laphakama lapho ukudla kwagcwala imikhiqizo yobisi. Kunombono wokuthi iqembu lesine legazi likhona iminyaka engu-1000 kuphela. Ososayensi abaqondi kahle ukuthi kuhlobene ngani.
Uyini umlingiswa wakho?
Ngasekuqaleni kwekhulu le-20 amaFuruqawa Takeshi aseJapane aphakamisa ukuthi kukhona ukuxhumana phakathi kweqembu legazi nokuzimela komuntu.
Kukholelwa ukuthi abantu abanamaqembu egazi lasendulo kumele bazinakekele ngemikhiqizo yenyama ukuze bahlale beqinile futhi behlala njalo. Njengokuhlobisa bayoba imifino efanelekayo. Ngokudla okune-starchy, kungcono hhayi ukuxuba amaprotheni. Izitshalo nezitshalo ngokuvamile zingancishiswa, njengamazambane namaqabunga. Kusuka kumikhiqizo yenyama kunconywa ukuba udle inyama yenkomo eningi, okungasetshenziswa yinkukhu noma inhlanzi. Abantu abanjalo kaningi banezifo zamathunjini.
Kungcono ukunamathela ekudleni kwemifino, nokunciphisa inyama kuphela, kodwa nobisi. Noma kunjalo, imikhiqizo yobisi omuncu ngesamba esilinganiselwe iyasiza. Etafuleni kufanele kube soy, ubhontshisi kanye nezinhlamvu. Amazambane, iklabishi nommbila badla kangcono kakhulu, njengamaqanda, nenkukhu. Labo abanegazi leqembu lesibili bangabhekana nezifo zesifo sofuba, isifo sikashukela, isifo se-coronary, isifo sokuphefumula kwesifo sofuba, izifo, ama-leukemia kaningi kunezinye.
Ubisi nganoma yiluphi uhlobo luwusizo kakhulu kubamele beqembu. Umdlalo wenyama, kanye nemikhiqizo yenyama eyenziwa ezifuywayo (isibonelo, iwundlu), nazo zifanelekile ukudla. Imifino, izithelo namaqanda zigajwa ngokujwayelekile. Ungahlanganisa ukudla okuhlukene, kodwa, okubaluleke kakhulu, ukudla kufanele kube nokulinganisela. Ukudla kwemifino kuhle ukufaka inyama encane nemikhiqizo yobisi (ikakhulukazi i-kefir noma i-yogurt). Akuyona inkukhu ewusizo kakhulu, kanye nezithelo ezibomvu nemifino (utamatisi, amapomegranati, ama-persimmons nabanye). Abantu abaneqembu lesithathu legazi bajwayele ukuqhutshwa pneumonia, futhi emva kokuhlinzwa, ukutheleleka okuhlukahlukene kanye nokwehla. Bajwayele ukuhlasela i-radiculitis, i-osteochondrosis nezifo ezihlangene.
Abantu abaneqembu legazi kudingeka banakekele ukuqinisa ukuzivikela. Ngokuvamile babamba ubanda, basengozini yokubamba umkhuhlane nezinye izifo. Kubaluleke kakhulu ukuthi ukudla kuqukethe imifino eminingi nezithelo ezinamavithamini.
Kwamanye amazwe eYurophu naseJapane, odokotela abaningi banikeza abantu abangaphezu kweminyaka engama-50 ukuthi baphuze ukuvimbela izimali zokuhlanza igazi ngamasonto amabili ngonyaka. Basiza ukugcina igciwane lesandulela ngculaza kanye nokugaya umzimba, ukususa umzimba wegciwane namagciwane.
Ngifuna ukuba ngumnikeli!
Ukuba ngumnikeli kuhlonishwa kakhulu. Kodwa lokho okuvela eminikelweni kwakuyisizuzo kuphela, kubalulekile ukuqonda isikhathi nokuthi kuvunyelwe kanjani ukunikela ngegazi, ukuthi kungenziwa kanjani kaningi. Phela, kukhona ukuphikisana okuphelele nokuhambisana nokunikezelwa kwegazi.
• Kunqatshelwe ukunikela ngegazi nge-AIDS kanye nesifo sofuba esibangwa yi-viral hepatitis, ukuphuza utshwala nokuphuza ngokweqile.
• Kumelwe kudlule okungenani inyanga emva komkhuhlane noma i-ARVI, ngaphambi kokuthi ungene ekhoneni leqoqo legazi.
• Emva kokukhipha izinyo, ungaba umnikeli emva kwezinsuku ezingu-10, nangemva kweminye imisebenzi - emva kwezinyanga ezingu-6. Uhlu olugcwele lwezingqinamba nokulinganiselwa lunikezwa udokotela ekuhlolweni kokuqala, okuvame ukwenzeka ngaphambi kokuba umuntu abe umnikeli. Ngezinsuku ezimbili ngaphambi kokulethwa kwegazi, kuzodingeka ukhiphe ekudleni konke okunamafutha, okuthosiwe, okubhema nokuvumba, kanye namaqanda nobisi. Futhi, noma imiphi imithi neziphuzo ezidakayo inqatshelwe, kodwa kufanele uphuze amanzi amaningi. Esikhathini esiteshini sokumpontshelwa, shiya ekuseni ngesisu esingenalutho futhi uthola ubuthongo obuhle. Khona-ke uzodlulisela kalula inqubo. Uma unikela ngegazi lonke, ngeke kuthathe imizuzu engaphezu kwengu-10. Kodwa ukulethwa kwamaplatelet kuchitha amahora amabili. Uma unikeza odokotela be-plasma egazi bayokugcina imizuzu engu-40. Ngemva kokunikela ngegazi, ungasheshi ukugijima ngokushesha ebhizinisini. Kungcono uhlale futhi ulalele imizwa yakho. Ungakhohlwa ukuthi uthathe isitifiketi somnikelo ukuze ukwazi ukusebenza izinsuku ezingaphezulu emsebenzini, futhi uthole isigqebhezana sokudla. Ukuphumula okwengeziwe, thola ukulala ngokwanele, hamba, udle kahle. Ungakhohlwa ngemifino nezithelo ezintsha, uphuze amanzi amaningi kanye netiye. Khumbula ukuthi kuze kube yilapho ukulethwa kwegazi okulandelayo kufanele kube izinyanga ezimbili, futhi emva kwezinyanga ezingu-4-5 uthatha ikhefu izinyanga ezingu-3. Uma unikeze izingxenye zegazi ngabanye, ukuvakashelwa okulandelayo kwento kungeke kube ngaphezu kwezinyanga ezimbili, kodwa kufanele uqondise udokotela. Ngendlela, ngezikhathi phakathi kweminikelo yegazi, ungasebenzisa izindlela zokwandisa i-hemoglobin ne-hemopoiesis. Lezi zingamakhombi namanzi, asetshenziselwa i-anemia.
Ngisiphi isifo egazini, inani lamagciwane liyanda. Ukulwa nesifo, amangqamuzana omzimba omzimba kanye nezidakamizwa azibulale. Ngokubulala, amagciwane aphonsa ubuthi egazini, okwandisa umthwalo emzimbeni ogulayo. Ezimweni ezinjalo i-propolis izoba nomthelela wokuhlanza osebenzayo. Thatha ucezu oluncane lwe-propolis, uhlafune isikhathi eside ngangokunokwenzeka bese uyagwinya. Yenza lokhu izikhathi ezingu-3-4 ngosuku 1 -1.5 amahora ngaphambi kokudla. Ngokuvamile ngemifudlana, izifo ezivuvukalayo kunconywa ukuthi ziphuze ijusi noma i-cranberry. I-Cranberries nayo iyasiza ekuvimbeleni ukungcola kwegazi. Phuza i-cranberry juice noju (ukunambitha) 1-2 izikhathi ngonyaka ngamasonto amathathu. Ngeviki lokuqala, uphuze u-0.5 indebe izikhathi ezintathu ngosuku, okwesibili - izikhathi ezimbili ngosuku, kanye nesithathu - 1 isikhathi ngosuku. Ungasebenzisi le remedy uma une-asidi ephezulu noma unezifo ezinzima zomzimba, isibonelo isilonda esiswini noma isilonda se-duodenal.
I-Cystitis nezifo zesistimu ye-genitourinary
Izincomo zamazinyo zokunakekelwa kwamazinyo
Inqubo yokwelashwa kwezokwelapha komuntu wesifazane
Ukulahlekelwa Izinwele Ekubelethweni
Izakhiwo zokuphulukisa zembewu yamathanga
Ukuphulukiswa nemikhiqizo ye-azurite
Kubangelwa kanye nokwelashwa kwengcindezi yokungasebenzi
Inkukhu ethosiwe nge-batter kathathu
Usebenzise kanjani i-watermelon ekuqaleni?
Ukuhaha komuntu, umbono wesazi sengqondo
Ukushisa ubuso ebusweni nasentanyeni ngeqhwa lezimonyo
Indlela yokwenza ikhaya lokusungula kusihlwa?
I-Veal ne-porcini amakhowe enhlama
Ukudla okuwusizo namavithamini
Yini okufanele ngiyenze ukuze ngibelethe?
Ukunakekelwa kakhudlwana kwesikhumba
Izifo ze-venereal kwabesifazane
Amehlo e-convex: indlela yokuwapenda
Abantu abathandekayo nokuphila komuntu siqu ka-Yevgeny Mironov
Indlela yokuhlobisa amaqanda e-Easter ngezandla zakho ezinyathelo-nge-step master amakilasi namavidiyo